mo-sys ကင်မရာကို Motion စနစ်များပိုမိုဆန်းသစ်သောရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်းသည်အဆိုပါလမျးပှငျ့သှား - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » အသားပေး » mo-sys ကင်မရာကို Motion စနစ်များပိုမိုဆန်းသစ်သောရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်းသည်အဆိုပါလမျးပှငျ့သှား
တစ်ဦးအမြင်အာရုံ medium အဖြစ်, ရုပ်ရှင်ယင်း၏မူဘောင်အတွင်းအများအပြားနည်းပညာဆိုင်ရာရှုထောင့်ထည့်သွင်း။ အခြေခံအဆင့်တွင်, ရုပ်ရှင်အောင်အစောပိုင်းလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်လုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်အစေခံသောပုံမှန်အိမ်မှာရုပ်ရှင်လုပ်ပျမ်းမျှကင်မရာသုံးပြီးသကဲ့သို့လွယ်ကူသည်။ ယနေ့ရုပ်ရှင်တစ်ဦးစံဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာနှင့်အတူအနိမ့်ဘတ်ဂျက်အပေါ်ကိုဖန်ဆင်းနိုင်ပါသည်။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောဖော်ပြထားသောသူတွေကိုအဖြစ်ဥပမာသုံးပြီးသူတို့ထိထိရောက်ရောက်နည်းပညာစွမ်းရည်များ၌ရှိကြ၏ကဲ့သို့အလယ်အလတ်သာတစ်ဦးထက်ပိုသောအဟောင်းကျောင်းကိုချဉ်းကပ်မှုအစေခံရန်အလုပ်ဖြစ်တယ် ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး။ ရုပ်ရှင်၏အလယ်အလတ်ကအကြောင်းအရာအလိုက်အတွေ့အကြုံကိုရုပ်ရှင်ကိုထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းတိုးမြှင့်မှကြွလာသည့်အခါနည်းပညာကအရမ်းအကောင်းဆုံးအဘို့ဤမျှလောက်ဝေးပြုတော်မူပြီသလောက်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲဆက်လက်သိရသည်။
ဒါကြောင့်ရုပ်ရှင်ကာတွန်းနှင့်ရွေ့လျားမှုဖမ်းယူသို့ကူးသည့်နည်းပညာဆိုင်ရာနယ်နိမိတ်မှကြွလာသည့်အခါတစ်ဦးသံသယမရှိဘဲဆီသို့ဦးတည်စွမှအများဆုံးစိတ်ဝင်စားဖွယ်နှင့်စိန်ခေါ်မှုဒေသများဖြစ်ကြသည်။ ဤဒေသများ, မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပေမယ့်အပြည့်အဝအသုံးချခံရဖို့သူတို့ရဲ့အလားအလာများအတွက်နိုင်ရန်အတွက်အသေးစိတ်များစွာသောသဘောတူညီချက်လိုအပ်သည်, ဤသူတို့ကိုထောက်ပံ့နည်းပညာ function ကိုတစ်ဦးလုံလောက်သောနည်းလမ်းများကိုရှိပါတယ်ဖြစ်ပျက်ရန်အဘို့အ။ သငျသညျသစ်ကိုနယ်မြေများသို့ဖြတ်ကျော်သက်ရောက်သည်အဘယ်မှာရှိအထူးရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ခဲ့လျှင်သင်ကဲ့သို့သောဥပမာကိုကြည့်နိုင်ခြင်း Captain America The First Avenger, နံရံနှင့် ဗင်္ယာမိန်အမျိုး Button လေး၏ Curious Caseရိုးရှင်းစွာမြှင့်တင်ရန်, ဒါပေမယ့်စာသားတစ်ဦးဝတ်စုံဒီဇိုင်နာသို့မဟုတ်ခေတ်မီ CGI ပြီးမြောက်နိုင်သည့်အရာကို၏ဘုံကျော်လွန်တစ်ခုခုသို့ပုံရိပ်၏အခြေခံအကျဆုံးပုံစံထပ်ဖွမဟုတ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်ရာ။ ဤသည်အဘယ်မှာရှိ mo-sys ကင်မရာကို Motion စနစ် သူတို့ရဲ့မြင့်မားခေတ်မီကင်မရာများနှင့်သူတို့လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်များနှင့်ဖြစ်ပွားနေသောအတွင်းရုပ်ရှင်အမျိုးမျိုးပေးပြီးပြီအမျိုးမျိုးသောနည်းပညာဆိုင်ရာတိုးမြှင့်မှုများများအသုံးပြုခြင်းမှတဆင့်ပုံသို့ကြွလာ။
၎င်းတို့၏အလုပ်နှင့်အတူကျွမ်းတဝင်မရှိသောသူတို့အဘို့, မို-sys ကင်မရာကို Motion စနစ်ရုပ်ရှင်နှင့်ထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ကင်မရာနည်းပညာထုတ်ကုန် crafts ။ သူတို့ရဲ့မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အသင်းနှင့်ကင်မရာကိုထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများရောက်ရှိရန်အတွက်အကွာအဝေးမှကြွလာသည့်အခါ၎င်းတို့၏ရည်ရွယ်ချက်များဝေးလံခေါင်သီအကြီးအကဲများ & ရွေ့လျားမှုထိန်းချုပ်မှုအပေါ်အဓိကအားအာရုံစူးစိုက်, ထုတ်လွှင့်စက်ရုပ်, စက်မှုနှင့် optical AR များအတွက်ခြေရာခံကင်မရာ, ကို virtual ထုတ်လုပ်မှုနှင့် VR နှင့် On-set ကို visualization ။ ရိုးရှင်းတဲ့စည်းမျဉ်းများများတွင်မို-sys နောက်ထပ်ကျနော်တို့သေးတုန်းပဲကိုယျ့ကိုယျကိုကပြည့်စုံခဲ့ပုံ၏အသေးစိတ်အကြောင်းကိုအံ့သြတွေ့ပါက၎င်း၏အများဆုံး TRANSCEND အနှစ်သာရထဲမှာရုပ်ရှင်အပေါ်သက်သေခံရှုပ်ထွေးပုံရိပ်တိုးမြှင့်တစ်ဦးနည်းလမ်းများအဖြစ်ရုပ်ရှင်နည်းပညာပံ့ပိုးပေးရန်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
မို-sys ရဲ့အလုပ်တစ်ခုမှာဥပမာရုပ်ရှင်လည်းပါဝင်သည် အရေးကြီးမှုအဆိုပါ 2013 အော်စကာနီးစပ်သည်၎င်း၏ခြောက်ဦးတစ်နှစ်နှစ်ပတ်လည်နေ့မှလာမယ့်အရာအယ်လ်ဖွန်ဆို Curon ဒါရိုက်တာသိပ္ပံ-Fi ကို Epic, ဆန်ခါတင်စာရင်းဝင်ခဲ့ပြီး။ ရန် mo-sys ရဲ့ပံ့ပိုးမှုများ အရေးကြီးမှု ယင်းသူတို့၏ဝေးလံသောဦးခေါင်းနှင့်အတူရုပ်ရှင်ရဲ့ DP, Emmanuel '' Chivo '' Lubezki ပေးထောက်ခံမှု လာ. Lambda.
အဆိုပါ Lambda ၏နောက်ဆုံးပေါ်မော်ဒယ်, အမို-sys Lambda 2.0 တစ် motion control feature ကိုအတူဝေးလံသောဦးခေါင်းရိုးတစ် 110 ခလရ2/3ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအထူးအပိုမိုးသည်းထန်စွာကင်မရာ packages များအဘို့ဒီဇိုင်း, ဤကပင်ကြောင်း 3D-stereoscopic မှန်တူးစင်၏ကင်မရာအထုပ်မဆိုအရွယ်အစားအဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏မြန်ဆန်လွယ်ကူသောချိန်ညှိဘို့ခွင့်ပြုထားတဲ့တယ်လီစကုပ်ကင်မရာပြားနှင့်အတူ Pre-တပ်ဆင်ထားသည်မည်မျှ၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ Lambda 2.0 ကိုလည်းအော်ပရေတာဖော်ရွေသည်နှင့်အပြည့်အဝ, အ setting များကိုပြောင်းလဲနေတဲ့အပြောင်းအရွေ့မှတ်တမ်းတင်ပြီးမြန်ဆန်လွယ်ကူသောလုပ်ငန်းစဉ်အားပြန်ကစားစေသည်တစ်ခုအလိုလိုသိ user interface ကိုအသုံးချတဲ့ touchscreen ကထိန်းချုပ်မှုအင်္ဂါရပ်နှင့်တကွကြွလာ။ မဆိုရွေ့လျားမှုဒေတာမှတျတမျးတငျထားနှင့် VFX အတှကျအသုံးပွုနိုငျသညျ။
အဆိုပါ Lambda ၏နောက်ထပ်အလွန်ကြီးစွာသောအင်္ဂါရပ်၎င်း၏ modular ၏ရှိရာတစ်ဦးနှစ်ဦး-ဝင်ရိုးခေါင်းကိုချိန်ညှိလိုတဲ့ဇာတ်လမ်းအတွက်ကြောင့်အလွယ်တကူတစ်360˚လိပ်ဝင်ရိုးနှင့်အတူသုံးဝင်ရိုးမော်ဒယ်မှအဆင့်မြှင့်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ Gyro တည်ငြိမ်ဆက်ပြောသည်ခံရဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်လည်း, ထိုဖြစ်နိုင်ချေ၏ဘုံအပြင်ဘက်တည်ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အဆိုပါ Lambda 2.0 လည်းသုညအဘယ်သူမျှမချဉ်းကပ်လမ်းပေါ်တက်ကိစ္စများရှိပါသည်ဆိုလိုတာကတန်ပြန်, ထို့ကြောင့်အဘယ်သူမျှမအောင်းနေချိန်ရှိပါတယ်။ ထို့အပြင်သဘာဝကန့်သတ်ခြင်းနှင့်ပင်အလိုမယ့်မြင်ကွင်းများ၏ရိုက်ကူးရေးကာလအတွင်းယင်း၏လှုပ်ရှားမှုများကိုရှုပ်ထွေးဖို့ခြိမ်းခြောက်မယ်လို့ပြင်းထန်ပူပြင်းခြင်းနှင့်အအေးအပူချိန်အခြေစိုက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုဆီးတားနိုင်ဖြစ်ခြင်းနေစဉ် Lambda 2.0 ကိုလည်းအထူး, ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ကြံ့ခိုင်နှစ်ဦးစလုံးဖွစျဖို့သက်သေပြကြပြီဂီယာဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားပါတယ် ပတ်ဝန်းကျင်မှာကဆိုပါတယ်အပေါ်အားကိုးဖို့ရှိသည်။
ချက်နဲ့ကင်မရာလှုပ်ရှားမှုတွေ၏ဘာသာရပ်သို့မစူးစမျးသောအခါ, Lambda 2.0 အလွန်အမျိုးအစားသို့ကိုက်ညီ။ အခုတော့ကဲ့သို့သောရုပ်ရှင်၏အမှု၌ အရေးကြီးမှုလေး lambdas ကျော်လိုအပ်သောသူတို့တစ်တွေမြင့်မားသောတိစက်ရုပ်ရွေ့လျားမှုထိန်းချုပ်မှုတူးစင်သောအောက်ခြေ & ဒျေါလီ, ကူညီပံ့ပိုးရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
ဤအ Lambdas သုံးပြီးခုနှစ်, Emmanuel Lubezki ကပြောပါတယ်, "နီးပါးတိုင်းရိုက်ချက်, မို-sys ကနေစက်ရုပ်ကင်မရာအကြီးအကဲများနှင့်အတူဖန်ဆင်းခဲ့သည်" သူတို့အခြို့သောရိုက်ချက်များစဉ်အတွင်းသရုပ်ဆောင်ရဲ့မျက်နှာများပေါ်တွင်အရိပ်လျှော့ချတဲ့နည်းလမ်းအဖြစ်ဝေးလံသောဦးခေါင်းရဲ့သုညတန်ပြန်နှင့်မြင့်မားသောတိကျပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အသုံးပြုသွားမည်။ အဆိုပါအကြားပူးပေါင်း အရေးကြီးမှု ပိုပြီးပြင်းထန်ဖို့ space ၏ကျယ်ပြန့်ထောင့်ရိုက်ချက်များကနေပြောင်းလဲနေတဲ့စဉ်ရုပ်ရှင်သင်္ဘောသားများနှင့်မို-sys နောက်ထပ်, ကင်မရာလူတစ်ဦး၏အစားရွေ့လျားသောအခါ, ကအခြေခံအားဖြင့်ဇာတ်ကောင်တစ်ဝှမ်းမြောကြောင်းဖော်ပြထားသူရုပ်ရှင်ရဲ့ VFX ကြီးကြပ်ရေးမှူး, တိ Webber ကအသေးစိတ်ရှင်းလင်းခဲ့သည် အနီးကပ်တက်ဇာတ်ကောင်များအကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးရိုက်ချက်များနှင့်ဒုနျအလှနျ။ ဤသည်လုပ်ရပ်အားလုံးစက္ကန့်တဲ့ကိစ္စအတွင်းပြည့်စုံ, ဤခေတ်မီ၏ကင်မရာကိုအလုပ်ကကင်မရာသည့်သရုပ်ဆောင်များကိုန်းကျင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွှေ့ဖို့အတှကျအခွင့်ပြုခဲ့သော Lambda, လိုအပ်သောနှင့်တူသောရုပ်ရှင်၏ရှုပ်ထွေးသောပုံရိပ်ယောင်များပေးသောမည်သည့်မသက်မသာရာထူး၌သူတို့ကိုချပြီးမပါဘဲခဲ့သည် အရေးကြီးမှု ဘယ်မှာဇာတ်ကောင်ရိုးရှင်းစွာမျက်နှာပြင်အချိန်တစ်နာရီနှင့်တစ်နှစ်ခွဲကျော်ဘို့အာကာသပတ်ပတ်လည်ရေပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်မှာပြထားတဲ့ရှုပ်ထွေးသောရွေ့လျားယခုသံသယကြီးစွာကွက်များအသုံးပြုခြင်းနှင့်အတူထွက်စီစဉ်ထားခြင်းနှင့်အတွင်းပိုင်းမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည် Autodesk မာယာနှင့်အနောက်ပိုင်းတွင်ထုတ်လုပ်မှုစဉ်အတွင်းအောက်ခြေ & ဒျေါလီစက်ရုပ်တို့ကပြန်ကစား။ သို့သော်ဤမျိုးစုံကးခြေရာခံစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းသာနောက်ထပ် Lambda နှင့်အလွန်ချက်နဲ့နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်-ရွေ့လျားကင်မရာစစ်ဆင်ရေးများအတွက်လုပ်သူကဖွင့်စွမ်းရည်၏ကြီးမြတ်တဲ့ function နေဖြင့်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
Olli Kellmann, ရုပ်ရှင်ရဲ့ motion control အော်ပရေတာဖော်ပြထား "ဒီအမှုအရာကိုစမ်းသပ်ခံရဖို့ရှိသည်နှင့်ရှုပ်ထွေးတက် CG ပတ်ဝန်းကျင်အတွင်းရှိကို virtual ကင်မရာမသက်ရောက်မှုရှိသည်အစုံပေါ်မှာပြောင်းရွှေ့နိုင်အများအပြားအချက်များရှိပါသည်။ အဆိုပါတစ်မော်တာ၏တန်ခိုးတော်ကို၎င်း, ဘယ်လိုအရှိန်နှင့်မြေထုဆွဲအားအင်အားသုံးအဆိုပါရေနံတွင်းတူးစင်ကိုထိခိုက်ကဲ့သို့သောအရာများ။ " နောက်ထပ်သူတို့အဘို့အရှေ့တွင်သောစိန်ခေါ်မှုများအားကိုင်တွယ်ခုနှစ်, Ollie နှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ရာအူးလ် Rodriguez သူတို့ရဲ့အမှန်တကယ်မြန်နှုန်း၏ 10% နှင့်အတူပြန်လည်ပြီးသားမှတ်တမ်းတင်ထားသောရွေ့လျားကစားစတင်ခဲ့ပြီးတော့သူတို့က% 100 ဖို့အားလုံးကိုလမ်းတိုးတက်လာခဲ့သည်။ Slow-motion ပြန်ဖွင့်သုံးခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကဦးခေါင်းအဆုံးစွန်အထိမည်သည့်အချိန်မဆိုကြိုးတွေညှိများနှင့်ချိန်ညှိစေနိုင်ခဲ့ကြတယ်။ သို့သော် Olli နောက်ထပ် Lambda ဦးခေါင်းရဲ့အားကောင်းတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်စွမ်းရည်များ၏ခေတ်မီ function ကိုအသေးစိတ်အစီအစဉ်များကိုစီစဉ်သောသူတို့ရရှိခဲ့သည်ဘယ်လောက်ရွေ့လျားပေးထားသောအဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်၏သင်တန်းသူများကိစ္စရပ်များကိုတာကိုမမွငျခဲ့သညျ။
အဆိုပါ Lambda ဦးခေါင်းကိုလည်း Chivo ရုပ်ရှင်များတွင်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်သော Pre-ဒီဇိုင်းရွေ့လျား load နှင့်ပြန်ကြည့်နိုင်ခြင်းဖို့ option ကိုပေးအပ်ခဲ့သည်။ အခုတော့အဲဒီရွေ့လျားခြင်း, Lambda ပစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာထိုကဲ့သို့သောမြင်ကွင်းများ၏ reframing, အချို့ကင်မရာလှုပ်ရှားမှုတွေ၏သန့်စင်များနှင့်ကိုက်ညီရန်လိုအပ်သည့်တုံ့ပြန်မှုအချိန်အဖြစ်သာရိုးရှင်းသောအချို့သောအချက်များအကြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးဆိုတဲ့အချက်ကို Pre-မှတျတမျးတငျထားခဲ့ပေမယ့် အဆိုပါသရုပ်ဆောင်တွေ၏လှုပ်ရှားမှုများ။ ကမ်ဘာပျေါတှငျအပေါငျးတို့သကွက်နှင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးတစ်မြင်ကွင်းတစ်ခုသို့ထည့်သွင်းနိုင်ပေမယ့်မိုဘိုင်းနှင့်အချိန်ကိုက် function ကိုချွတ်အခြေစိုက်ကိုလည်း Lambda ကိုအလွန်ပိုကောင်းစေပါတယ်ရာ၏လိုအပ်သောအချက်များဖြစ်ကြသည်။
မိုက်ကယ် Geissler, ပိုင်ရှင် & တည်ထောင်သူ, မို-sys ကင်မရာကို Motion စနစ်
အဆိုပါ Lambda ရုံ Mo-sys ပေးအများအပြားအကြီးအနည်းပညာဆိုင်ရာအံ့ဖွယ်တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်ကမယုံနိုင်လောက်အောင်တစ်ခု 2017 အင်တာဗျူးတွင်ပြောကြားခဲ့သည်သူကိုအသိဉာဏ်တည်ထောင်သူနှင့်ပိုင်ရှင်မိုက်ကယ် Geissler, ရဲ့, "ကျွန်မနေတဲ့ပြဿနာ solver မိပါတယ်။ ဒါက "ငါပျော်မွေ့သည့် bit နဲ့ဖွင့် အရာတကယ် Mo-sys ၏အဓိကမစ်ရှင် encapsulates ။ ၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဒြပ်စင်မှနည်းပညာဆိုင်ရာတိုးမြှင့်ပေးဖို့သူတို့ရဲ့အလှူငွေ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး မှာအားလုံးရိုးရှင်းတဲ့မဟုတ်ပါဘူး, သာနည်းပညာအဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာအဖြစ်ပိုပြီးစိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာသည့်ဖြစ်စဉ်ကို, wow မှသာအလုပ်လုပ်သောမြင်ကွင်းများ၏ရိုက်ကူးရေးကာလအတွင်းပိုပြီးမြေပြင်ကိုဖုံးလွှမ်းရန်နည်းလမ်းအဖြစ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်လျော့နည်းအထပ်ထပ် သာ. ကြီးမြတ် mobility များကို၎င်းတို့၏စွမ်းရည်သရုပ်ပြထားပါတယ် ပရိသတ်တွေ, ဒါပေမယ့်လည်းရုပ်ရှင်နဲ့ကာတွန်းထဲမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုရှိသည်သောသူသည်ကမ္ဘာ့တလွှားအနုပညာရှင်များလာအောင်နှိုးဆွဖို့အလုပ်လုပ်ကြသည်။
မို-sys ကင်မရာကို Motion စနစ်များအကြောင်းကိုပိုမိုရှာဖွေ, သင်မှာအွန်လိုင်းကသူတို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် www.mo-sys.com, သို့မဟုတ်သင်ကသူတို့ကိုထွက်စစျဆေးနိုငျ အမ်စတာဒမ်အတွက် 2019 IBC ပြပွဲ in ခန်းမ6- 6.C12 နှင့် ခန်းမ 8 - 8.F21 ။
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ထုတ်လွှင့်-SocialMeida အထောက်အပံ့ ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana FOR-တစ်ဦးက ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor IBC မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး SJGolden - လှံ & Arrows စာတန်းထိုး ကိုလိုနီ / ချီကာဂို က Ultra HD ဖိုရမ် မူကွဲစနစ်များ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် virtual reality	2019-07-31
ယခင်: ဆော်ဒီအာရေဗျ၏ပထမဆုံးထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ Baselight ထည့်သွင်း
နောက်တစ်ခု: IBC2019 မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးကုမ္ပဏီများသည်လာမည့်နည်းပညာကွေး၏နေဖို့သေချာကြောင်း Simplestream သရုပ်ပြ cloud-based ဖြေရှင်းနည်းများကိုမြင်